AbakwaSony bakwazile ukuthengisa iifowuni ezizigidi ezi-1.6 kwikota yesithathu yalo nyaka | I-Androidsis
USony wenza umsebenzi omkhulu ngoku. Inkampani ilindele ukuba irekhodi ye-Q2018 XNUMX yenzeke kwimisebenzi yayo yonke, kodwa xa kufikwa kwicandelo layo le-smartphone, izinto zibonakala zisiba mandundu, kwaye akukho lutshintsho lubonakalayo.
AmaJapan asitshintshile isicwangciso sakhe sentengiso kunye nezicwangciso ukusukela Ilahleko zabo zibalasele. Nangona kunjalo, ebelandela ngenjongo ikhosi efanayo ne-HTC, enye inkampani eyonwabele amaxesha amnandi kakhulu, kodwa ikwashiye nexesha elidlulileyo ukuba ihlale ngeenyawo kwimarike ye-smartphone enzima, ethe yanzima kuzo zombini iimveliso.
Ithuba leenyanga ezintathu eliphela ngoSeptemba 30, U-Sony ubhengeze ukuba ithumele kuphela ii-smartphones ezizigidi eziyi-1.6. Oku kubonisa ukwehla okukhulu kweeyunithi ezizizigidi ezili-1.8 xa kuthelekiswa neli xesha linye kunyaka ophelileyo kunye nokwehla okungaphezulu kwe-0.4 yezigidi xa kuthelekiswa nekota yesibini yowama-2018. Ngokwengeniso, la manani aguqulelwe kwi-1.000 yezigidigidi zeedola. Nangona kunjalo, ngaphandle kwamanyathelo okwehlisa iindleko, inkampani isaxela ilahleko ephezulu kunokuba bekulindelwe, eyi- $ 265 yezigidi, enxulumene nokwehla kwentengiso eYurophu, eLatin America nakuMbindi Mpuma.
Kwixesha elizayo, uSony uphinde wahlaziya uqikelelo lwayo. Ekuqaleni, kunyaka-mali ophela ngo-Matshi 2019, isigebenga saseJapan silindele ukuthunyelwa kwe-smartphone yeeyunithi zezigidi ze-10. Kodwa emva kokuhlaziya oku ukuya kwiiyunithi ezili-9 lezigidi ngoJulayi, inkampani iphinde yanciphisa inani laya kwiiyunithi ezisi-7 sezigidi. Ngaphandle koku, Iyunithi yeselfowuni yakwaSony ngoku kulindeleke ukuba ithumele ilahleko ye- $ 841 yezigidi, isixa esikhulu kakhulu kunoko bekulindelwe ngaphambili kwi-264 yezigidi zeedola.
Ngaphambili: AbakwaSony bathengise iifowuni ezizigidi ezi-2 kwikota yesibini yalo nyaka
Ngaphambili, inkampani yayilindele ukuba ishishini layo le-smartphone litshintshe inzuzo ngasekupheleni kuka-2019 okanye kwangoko ngo-2020 ngoncedo lwe-5G, kodwa USony uthe ulindele ukuba ilahleko iqhubeke kude kube kwangoko kwangoko kwi-2020. Ukongeza, ibhengeze ukuba iya kunciphisa iindleko zokusebenza ezinxulumene neshishini ngama-50%.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » AbakwaSony bakwazile ukuthengisa iifowuni ezizigidi ezi-1.6 kwikota yesithathu yalo nyaka
Uyenza njani i-Emoji Mini yakho kunye nenqaku elitsha kwiGboard